वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९९ प्रतिशत युवा दलालबाट ठगिने गरेको तथ्य खुलासा – Shirish News
जनकपुर २०७५ असार १४ गते
वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९९ प्रतिशत युवा दलालबाट ठगिने गरेको तथ्य खुलासा भएको छ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको परिवार चरम मनोवैज्ञानिक दबाबमा रहने गरेको समेत अध्ययनले देखाएको छ ।
मित्र धनुषा नामक गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवाशन परियोजना (सामी) मार्फत जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो । सुरक्षित आप्रवाशनसम्बन्धी मंगलबार आयोजित अन्तरक्रियामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको परिवार, विदेशमा सम्पर्कविहीन बनेका, मृत्युवरण गरेका तथा अशक्त बिरामी भएका परिवारका सदस्यले आफूहरू चरम मनोवैज्ञानिक दबाबमा रहेको बताएका थिए ।
परियोजनाका धनुषा संयोजक रामकुमार कर्णका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लागत, काम, कम्पनी, तलब तथा ड्युटीलाई आधार मानेर सर्वेक्षण गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ९९ प्रतिशत व्यक्ति ठगीमा परेको देखिएको छ ।
आव ०७३/७४ मा धनुषाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३५ हजार व्यक्तिमध्ये २ जनालेमात्र सरकारले तोकेको १८ हजार तिरेर विदेश गएको उनले बताए । सरकारले खाडीका ६ सहित ७ देशमा रोजगारीका लागि जाने कामदारका लागि १८ हजार रकम तोकेको छ तर मेनपावर कम्पनी तथा एजेन्टहरूले १ लाखदेखि १ लाख ८० हजारसम्म असुली गर्छन् । परियोजनाका रामकुमार कर्णले भने, ‘बलदिया (नगरपालिका) को भिसाको नाममा त १० लाखसम्म असुली गरेको पाइएको छ ।’
विदेशमा मृत्यु भएका वा सम्पर्कविहीन बनेकाहरूको आश्रित परिवारले मनोवैज्ञानिक दबाब तथा सामाजिक प्रताडनाका कारण कम्तीमा चार महिलाले आत्महत्या गरी सकेका छन् । ९ वर्षअघि ओमान गएका धनुषा लक्ष्मिनिया गाउँपालिका २ सिनुरजोडाका पल्टु यादव सम्पर्कविहीन बनेपछि निजकी श्रीमती सीता यादवले अढाई वर्षअघि आत्महत्या गरेकी थिइन । पल्टु र सीताका छोरी पुनिता र छोरा अमन बिचल्लीमा परेका छन् । आफ्नो मामाघरमा बस्दै आएकी १३ वर्षीया पुनिताले भनीन्, ‘आमा जिउँदो रहेसम्म स्कुलमा पढेकी थिएँ । आमा बितेपछि म र भाइ स्कुल जान छाडेका छौं ।’
मृतक सीताकी आमा राजो देवी यादवका अनुसार श्रीमान ओमानमा सम्पर्कविहीन बनेपछि गाउँकै इँटा भट्टामा काम गरेर छोरा–छोरीलाई पालन पोषण गर्दै आएकी सीताले गाउँलेहरूले चरित्रमाथि औला उठाउन थालेपछि विषसेवन गरेर आत्महत्या गरिन् । ‘पिता सम्पर्कविहीन छन् । आमा पनि छैनन् अनि दुवै नाति नातिनालाई मैले नै पालन पोषण गरेको छु । म आफैं गरिब छु । स्कुल कसरी पठाऊँ ?’वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये आव ०७३/७४ मा ९२ धनुषावासीको मृत्यु भएको थियो भने आव ०७२/०७३ मा ८० धनुषेली कामदारले विदेशमा मृत्युवरण गरेको मित्र धनुषाका रामकुमार कर्णले जानकारी दिएका छन् ।
पीडित परिवार संगठित हुनु जरुरी
सचिव, मित्र धनुषा
रिक्सा, ठेलावालाको संगठन छ तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा निजका परिवार असंगठित छन् । संगठित स्वर नउठेकै कारण उनीहरू मर्कामा छन् । हक अधिकारका लागि उनीहरू संगठित हुनु जरुरी छ । धनुषा युवा विदेशिने देशकै नम्बर एक जिल्ला हो तर रेमिटेन्स भने दोस्रो नम्बरमा आउँछ । यो किन भने हाम्रा अधिकांश कामदार
अदक्ष छन् ।
हामी स्कुल पनि भर्ना हुन नपाउने ?
लक्ष्मिनिया गापा, २ सिनुरजोडा
मेरा पिता पल्टु यादव गत ९ वर्षदेखि ओमानमा सम्पर्कविहीन छन् । अढाई वर्षअघि आमा सीता देवीले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरिन् । आमा मर्दा मेरो भाइ अमन ४ वर्षको मात्र थियो । हामीसँग जन्मदर्ता छैन । जन्मदर्ता आभावमा स्कुलमा भर्ना लिन मान्दैन । मामाघरमा बसेकी छु । म १३ वर्षकी भएँ । हामी दुई दिदी–भाइको जीवन कसरी चल्ने ? सरकारले मेरो पितालाई खोजी दिनुपर्‍यो । हामीजस्ता अनाथका लागि सरकारले सुविधा दिनुपर्‍यो ।
श्रीमान् अपांग भएर घर फर्के
नगराईन नगरपालिका ९, घोरघास
७० हजार ऋण काठेर श्रीमान् विश्वनाथ दासलाई साउदी पठाएकी थिएँ । काम गर्दै गरेका बेला उनको खुट्टामा गम्भीर घाउ लाग्यो । विदेशमा कमाएको सम्पूर्ण रकम उपचारमै खर्च भयो । पुन: टिकट पठाएर श्रीमान्लाई फिर्ता ल्याएकी छु । ७० हजार ऋण चुक्ता गर्न २ लाख ५० हजार तिरें । अहिले पनि श्रीमानको खुट्टाबाट रगत आउँछ । तीन नाबालक सन्तानसँगै श्रीमानको समेत पालन पोषण गर्नुपरेको छ । सरकारले हामीजस्ता पीडितका लागि विशेष सुविधा दिनुपर्छ ।
समाजको देख्ने दृष्टिकोण फेरिन्छ
नगराईन नपा ९, घोरघास
श्रीमान् विदेश गएको तीन वर्ष भयो । श्रीमान् छँदा राम्रो मुखले कुरा गर्नेहरू अचेल मनपरि कुरा गर्छन । श्रीमान्लाई विदेश पठाउन लिएको ऋण अझै चुक्ता गर्न सकेकी छैन । एजेन्टले राम्रो कम्पनी र तलब हुने आश्वासन दिएको थियो तर त्यहाँ सप्लाईमा पठाएको छ । घरमा पासपोर्ट, श्रमसम्झौता, मेनपावर कम्पनीसँग भएको सम्झौता र पैसा तिरेको रसिद छैन । उहाँ फर्केपछि ठगी गर्ने मेनपावर एजेन्टमाथि मुद्दा गर्छौं ।
ठग एजेन्टलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ
कमला नगरपालिका ९, दुबरकोट
नेपालमा गराएको मेडिकलमा फेल भए पनि १ लाख २० हजार तिराएर गाउँकै एजेन्ट राजकुमार मण्डलले मलाई मलेशिया पठाए । ‘मेडिकल फेललाई ग्यारेन्टी काम हुन्छ’ भन्दै मलाई सेकुरिटी गार्डको काम गर्न त्यहाँ पठाए तर मलाई फिर्ता आउनु पर्‍यो । गाउँ पुगेर पैसा फिर्ता माग्दा राजनीतिक दलका नेता एजेन्टको पक्षमा उभिए । यसै साता मित्र धनुषाको सहयोगमा ८० हजार रुपैयाँ फिर्ता पाएको छु । बाँकीको रकम पनि फिर्ता हुन्छ भने विश्वास जागेको छ ।
सेवासुविधा प्रदेशमा पनि उपलब्ध हुनुपर्छ
सदस्य, आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र
मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ तर वैदेशिक राजेगारीसँग सम्बद्ध सरकारी कार्यालय अझै पनि काठमाडौंमै छन् । अब प्रदेशस्तरमै पासपोर्ट, श्रमस्वीकृति तथा क्षतिपूर्ति आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पीडितको पहुँच सरोकारवाला निकायसम्म हुन नसकेकाले न्याय पाउन गाह्रो भएको छ । राजनीतिक दलका नेता मुलुकलाई एक चौथाई राजस्व तिर्ने वैदेशिक रोजगारीलाई वेवास्ता गर्नु आश्चर्यजनक हो ।